Dabaasha Pool Koloriin, sheyga, jeermiska - Maochen
Soo Saarista Video
Dabaasha Pool Koloriin
Qiimaha for Money
Si degdeg ah Ddlivery
soo dhaweyn noo
Waxaan bixinaa soo saarka TAYO BEST
Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. waa shirkad koox, oo diiradda saaraya kiimikada pool Dabaasha, Bactericides (Biocides) / sheyga, wax soo saarka Dhuxul iyo wixii la mid ah. Warshado ku yaalaan Weifang, Gobolka Shandong, Shiinaha. Iyadoo in ka badan 15 sano waayo-aragnimo in industry kiimikada, Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. waa mid ka mid ah Premier qeybiyeyaasha jeermiska ee Shiinaha. Sida soo saaraha ah oo lagu kalsoonaan karo iyo sumcad, waxaan soo saaro iyo dhoofinta dhammaan daafaha dunida. macaamiisheena ka Australia, Israa'iil, bari Koonfurta, Mid-bari, EUR, US, Mexico, Chile, iwm, in ka badan 20 dal.
Baro More +
Trichloroisocyanuric acid 90% kiniin (TCCA)
Trichloroisocyanuric acid Multi kiniin (TCCA)
dichloroisocyanurate Sodium (SDIC)
Biocides & sheyga (CMIT / MIT)
Sida jeermiska waayo, dabaasha, ilaha biyaha oo kulul, Baraakada, HBS; Naaxinta, balli kalluun, daaweynta biyaha Warshadaha, deegaanka nolosha iyo wixii la mid ah
+ DHEERAAD AH
Sida jeermiska waayo, dabaasha, biyo Warshadaha, biyaha, bleaching, deegaanka nolosha iyo si la cabbo on.
la ballaaran loo isticmaali karaa sida jeermiska, bleaching wakiilka ama oxidant keentay dabaasha-pool, biyo la cabbo, qaboojinta munaaraddii & wasakhda iyo biyaha qashinka iwm
Biocides & sheyga
Waayo, Products soo baara
Dhaqaalaha Horumarinta Zone, Hanting coal, Weifang, Shandong, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuq dhowran. Weifang Maochen Chemical Co., Ltd.